Author Topic: Manisha Koirala - Photo profile (Read 71187 times)
« Reply #60 on: February 11, 2010, 01:06:15 PM »
दीपेन्द्र लामा, काठमाडौं, माघ २६- बलिउड सुन्दरी मनीषा कोइरालाको झल्को पाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा सञ्चारकर्मीको भीड लागेको थियो। प्रतिष्ठानको प्रवचन कक्षमा सोमबार 'गर्ल्स' फिल्मको घोषणा कार्यक्रममा मनीषा प्रमुख अतिथिको रुपमा आउँदै थिइन्। निम्तालु र सञ्चारकर्मी सबै मनीषालाई नजिकबाट नियाल्न गेटमै प्रतीक्षारत थिए।
नेपाली फिल्म 'धर्मा'मा अभिनय गर्न मनीषा केही दिनदेखि काठमाडौंमा छिन्। सोमबार त्यही फिल्मको सुटिङ गर्न मनीषा पोखरा जाँदैथिइन्। त्यसैले 'गर्ल्स'को कार्यक्रममा उनी आउँदिनन् कि भन्ने अनुमान धेरैको थियो।
आयोजकले पूर्व निर्धारित समयमा मनीषा आउन नभ्याउने भएपछि कार्यक्रमको समय तीन घन्टा अगाडि सारेका थिए। सबै निम्तालुलाई यो हेरफेरको सूचना दिन आयोजकले भ्याएनन्। कार्यक्रममा अरू निम्तालुभन्दा सञ्चारकर्मीकै उपस्थिति बाक्लो हुनुको कारण यही थियो। आधा घन्टा कुर्दा पनि मनीषा नआएपछि केही सञ्चारकर्मी र निम्तालु कार्यक्रमबाट फर्किए। कार्यक्रमस्थलमा आएका हरेक गाडीतिर आयोजक र सञ्चारकर्मीको आँखा पुग्थ्यो। र, मनीषालाई नदेखेपछि सबै निराश बन्थे। टेलिभिजन पत्रकारहरूले चाहिँ 'आउने भनिए पनि मनीषा आइनन्, सञ्चारकर्मीहरू रित्तो हात फर्किए' भन्ने कोणबाट समाचार बनाउन त्यस्तै दृश्य क्यामरामा कैद गराउँदैथिए।
करिब एक घन्टापछि खरानी रङको एउटा कार तीब्र गतिमा हुइँकिएर आइपुग्यो, 'पार्किङ पछाडि' लेखेको बोर्डलाई ठक्कर दिँदै। सबैको ध्यान कारतिर मोडियो। फोटो पत्रकार र क्यामराम्यानहरू जर्‍याकजुरुक उठे। कारको पछाडिपट्टिको देब्रे ढोकाबाट प्रकट भइन्, मनीषा। उनको गुलाबी पहिरन र मुस्कानसहितको 'नमस्ते'ले सबैको मुहार उज्यालो बन्यो।
उनी गेटबाट तुरुन्तै उक्लिन पाइनन्। क्यामराले घेरिन र छेकिन पुगिन्। झन्डै एक मिनेट क्यामराहरू ख्लिक् ख्लिक् भएपछि उनले सोधिन्, 'कता?' आयोजकले 'माथि' भन्दै उनलाई डोर्‍याएर लगे। र, प्रवचन कक्षमा पुगेपछि उनलाई कार्यक्रम सञ्चालिका मानवी ढकालले स्टेजमा बोलाइहालिन्। स्टेजमा बसेकी मनीषाको फोटो खिच्न क्यामरावालाहरूको ठेलमठेल चल्यो। फोटोग्राफरहरूको 'पर्खाल'ले गर्दा अरू निम्तालु र सञ्चारकर्मीले दुई मिनेटसम्म मनीषाको अनुहार देख्न पाएनन्।
मनीषासँग धेरै समय थिएन। त्यसैले 'गर्ल्स' फिल्मका निर्देशक प्रिन्स र रिपोटर्स् क्लबका ऋषि धमलाले बोलेपछि मनीषालाई पालो दिइयो। 'एकदम राम्रो विषयमा फिल्म बनाइरहनु भएको छ, त्यसैले क्लासिक फिल्म बनाउनुहोला,' मनीषाले भनिन्, 'हामीले बलिउडको कपी गर्नु पर्दैन, आफ्नै कथा र संस्कृतिमा बनाए हुन्छ।'
नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यकै सदुपयोग गर्नसके फिल्म राम्रो बन्ने धारणा मनीषाले पोखिन्। भनिन्, 'लुक्लालाई हेर्नुस्, कति राम्रो छ त्यो ठाउँ, त्यस्तैत्यस्तै लोकेसन फिल्ममा देखिनुपर्‍यो।'
कलाकार जेनिशा केसी, प्रभा विष्ट र मटिन शेखको परिचय तथा फिल्म निर्माता प्रभुशमशेर राणाको मन्तव्यपछि कार्यक्रम टुंगिएको थियो। त्यसपछि मनीषा उठिन्। तर, केही सञ्चारकर्मीले प्रश्न राख्न थालेपछि उनले उठेरै जवाफ दिन थालिन्।
आफूले खेलिरहेको 'धर्मा' फिल्मको बारेमा बताउन अनुरोध गर्दा उनले भनिन्, 'यो फिल्मको बारेमा निर्माताहरूले मलाई केही नबोल्नू भन्नुभएको छ, उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेरै यसबारे बताउनुहुनेछ।'
'राम्रो कथा छ भने अरू नेपाली फिल्ममा पनि अभिनय गर्छु,' उनले आफ्नो पारिश्रमिकको बारेमा भनिन्, 'यताको फिल्म खेल्दा यहाँकै बजेटमा काम गर्छु।' उनले नेपाली फिल्म निर्माण गर्ने कुरा बेलाबेला बताउँदै आएकी थिइन्। सोमबार पनि उनलाई यसबारे सोधियो। उनको जवाफ थियो, 'एउटा सपना छ तर निर्णय गरिसकेकी छैन।'
नेपाली फिल्मको मौलिकतामा उनी पटकपटक जोड दिइरहेकी थिइन् र जाँदाजाँदै सुझाव दिइन्, 'नेपाली फिल्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलमा पनि लैजानुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रो कल्चर र हाम्रो लिभिङ स्टाइलमा फिल्म बनाइनुपर्छ।' 'ल है' भन्दै मनीषा हलबाट बिदा भइन् र कार चढेर बाहिरिइन्। उनीसँग फोटो खिचाएका फ्यानहरू भने कार्यक्रमस्थलमै आ-आफ्ना क्यामरा 'रिप्ले' गरेर हेर्दैथिए, जहाँ उनी अझै फरकफरक मुस्कान छर्दै थिइन्।
« Reply #61 on: February 11, 2010, 01:06:38 PM »
« Reply #62 on: February 16, 2010, 12:23:04 PM »
Manisha Koirala - Interview
« Reply #63 on: February 16, 2010, 12:28:09 PM »
« Reply #64 on: February 16, 2010, 12:33:22 PM »
शिव शर्मा - kantipur
कास्की, फाल्गुन ३ -
« Reply #65 on: March 07, 2010, 12:37:07 AM »
« Reply #66 on: April 08, 2010, 10:57:48 PM »
काठमाडौं महाराजगंज निवासी ३३ बर्षीय सम्राट र ४० बर्षीया बलिउड नायिका मनिषा कोइरालाबीच विवाहको लगनगाँठो कसिने खबरले दुवै चर्चामा छन् । मनिषासंगको सम्बन्ध र उनको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवनका बारे ईकान्तिपुरका सुरज कुँवर र बेनुप भट्टराई गरेको कुराकानीः
तपाईंबारे भनिदिनुहोस न ?
अमेरीकाको टेक्सासबाट इन्ड्रस्टीयल इन्जिनियरिङ्ग र एमबिए पास गरेपछि सन २००३ मेदेखी नेपालमा बस्दै आएको छु । बायोग्यासको क्षेत्रमा कार्यरत छु । यस्का लागि इकोफिन नामको संस्था दर्ता गरि एक वर्षयता अनुसन्धान गरिरहेको छु ।
तपाईको पारिवारिक पृष्टभूमी के हो ?
बुवा सुरेन्द्र दाहाल बासबारी छाला जुत्ता कारखानाका पूर्व म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाले आफ्नै लगानीमा घर छेउमै लेदरविङ्स नामको छाला जुत्ता काराखाना चलाउनु भएको छ । आमा गुणकेशरी चक्रपथको राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा कार्यरत हुनुहुन्छ । परिवारमा म कान्छो हु । जेठा दाजु सुरज पनि अमेरीकामैं एमबिए गरेर यतै शैक्षिक संस्थामा आवद्ध हुनुहुन्छ । पहिले बालमन्दिरमा आवद्ध उहाँ अहिले काठमाडौं एकेडेमी र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा संलग्न हुनुहुन्छ । पब्लिक हेल्थमा पिएचडी दिदी शुभाश्री र उहाँको परिवार अमेरीकामैं छन् । हामी तीनै जनाले विश्वविद्यालयको पढाई अमेरीकाबाटै गरेका हौं । पढ्ने सिलसिलामा सात बर्ष त्यहाँ बस्नुअघि दिल्लीमा विज्ञानबाट प्लस टू पास गरेको थिएँ । एसएलसी चाहि बुढानिलकण्ठ स्कुलबाट गरेको हु ।
मनिषासंग पहिलो भेट कहिले भयो ?
हाम्रो पहिलो भेट चार महिनाअघि काठमाण्डुमै भएको हो । म जस्तै विदेशमा पढेका १५/२० साथीहरुवीच सानो ग्यादरिङ थियो । त्यहीं मनिषासंग भेट भएको हो । त्यसअघि उनलाई देख्नु त परै जाओस भेट्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ ।
त्यो जमघटको उद्देश्य के थियो ?
विदेशमा पढेका तर नेपालमैं केही गरौं भन्ने सोच र चाहना भएका साथीभाईको अनौपचारिक भेटघाट थियो । (महिना र स्थान खुलाउन नचाहँदै) गएको जाडोयाममा पर्यटकीय शहरको एक रेष्टुरेन्टमा त्यो जमघट थियो । त्यतिबेला घर आएकी मनिषालाई पनि निम्ताएका थियौं ।
पहिलो भेटमा तपाईहरुबिच कस्ले मन परायो ?
त्यहाँ अन्तिममा पुग्ने म थिएँ । अरु भेला भइसकेका थिए । म निलो कोट पाइन्टमा थिएँ । मनिषा चाहिं हरियो सारीमा थिइन् । मैंले इज्जतदार नमस्कार गरें र आफ्नाबारे बताएँ । पढेर नेपाल फर्किनुको उदेश्य सुनाउंदा उनी प्रभावित भइन् । कार्ड सेयरिङ भयो । त्यसपछिका दिनमा भेटघाट र सम्र्पक हुनेक्रम बढ्यो ।
पहिले विहे वा प्रेम के प्रस्ताव राखियो ?
भेटेपछि हामीवीच फ्रेन्डसिप जारी थियो । उनका बानी व्यहोराले मलाई तानेपछि मन पराएँ । परिवारमा कुरा राखें । पोजेटिभ कुरा आएपछि मनिषलाई भनें । उनले पनि घरमा सुनाउँदा त्यस्तै संकेत आयो । त्यसपछि हामीवीचको माया विहे हुने चरणमा पुग्यो ।
डेटिङ पनि त जानुभयो होला नि ?
(अकमकाउँदै) डेटिङ त गइयो । तर कहाँ र कहिले भन्न मिल्दैन । उनको हजुरवुवाको मृत्यु भएको ४५ दिन नपुगेकाले यो विषयमा प्रोपोगाण्डा क्रियट नगरौं ।
मनिषाको कुन गुणले तान्यो ?
फिल्मी दुनियाँको अनुभव, बहुआयामिक व्यक्तित्व, घुलमिलपन, तार्किकता, जिम्मेवारीवोध, परिपक्ता, परिवारप्रतिको उत्तरदायित्व उनमा जति पाएँ, त्यसबाटै प्रभावित हुनपुगें ।
विहे कहिले र कहाँ गर्ने योजना छ ?
म आमा, बा र दाजुबाट प्रभावित भई काठमाडौं फर्केको मान्छे हुँ । डेफिनेट्ली विहे पनि यतै हुन्छ । तर त्यो कस्तो खालको र कहिले हुन्छ भन्ने दुई परिवारको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
विहेपछि मनिषा जी ले के गर्नुहुन्छ ?
भारतमा उनको छुट्टै पहिचान छ । चाहेको काम गर्न उनलाई स्वतन्त्रता हुनेछ । मैंले थाहा पाएसम्म उनले नेपालकै बालबालिकाको हितमा केही काम गर्ने सोच राखेकी छन् ।
मनिषासंग कतिको सम्पर्क हुन्छ ?
(टेवलमा राखेका दुईटा मोवाइल हेर्दै ) उनी सुटिङलाई इण्डियाको केरलामा छिन् । आवश्यक परे दिनमा चार/पाँचपल्ट पनि हुन्छ । -कुराकानीक्रममैं उनले मनिषालाई दुईपल्ट फोन गरेका थिए)
सेलिब्रेटीसँग विहे हुने भएपछि कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ ?
(हांस्दै) खासै त्यस्तो छैन । म लो प्रोफाइलमैं बस्न रुचाउछु । आफूले गरेको कामको चर्चा गर्न मन लागेपनि प्राइभेट लाइफलाई लिएर हाइलाइट हुने रहर छैन् ।
यदी मनिषासंग विहेको टुंगो नलागेको भए ?
घरमा विहेको पालो मेरै थियो । स्वदेश फर्के देखिनैं विहेका लागि परिवारको दवाव थियो । मन मिल्ने केटीको खोजीमैं थिए । त्यही बेला उनी भेटिइन् । विहेपछि यही बुढानिलकण्ठमा घर बनाएर बस्ने रहर छ ।
तपाईका रुची के के हुन् ?
म खेलकुदको सौखिन हुँ । स्कुलदेखि नैं बास्केटबल, सकर, ह्याण्डबलको खेलाडी हुँ । अहिले पनि फुटवल खेल्छु ।
मनिषासंग जोडी बाँध्दै हुनुहुन्छ, फिल्म चाहिं कतिको हेर्नुहुन्छ ?
नौ बर्षअघि दिल्लीमा पढ्दा उनको '१९७४ अ लभस्टोरी' हेरेको थिएँ । त्यसपछि अरु पनि हेरें हुँला तर फिल्मको नाम र स्टोरी बिर्सिन्छु । अचेल व्यस्तताले टीभी हेर्ने फुर्सद छैन ।
आगामी असार ५ गते विहेको टुंगो लागेको हो ?
यसबारे मलाई थाहा छैन् । हाम्रो परिवारबिच कुराकानी हुँदैछ । अहिले उनको हजुरबुवाको जुठोका कारण यो शुभकार्यबारे निर्णय गर्नु राम्रो मानिदैन् ।
विहेबारे संचारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि कस्तो लाग्दैछ ?
एकै दिनमा हैरान भइसकें । हेर्नुहोस -मोबाइल देखाउदै) दिउँसो ४ बजेदेखी ८ बजेसम्म मात्रै ४८ वटा भन्दा बढि कल स्त्रिmनमा छन् । बिहानदेखि आएका कल त कति हुन् कति । फोनले टेन्सन गरायो । अफिसमेत गइन । मलाई मात्र कहाँ हो र, साथीभाई र घरमा समेत विहेवारे सोधेर हैरान पारिरहेका छन् । फोनमैं झुण्डिनु परेकाले आमाले विहान लगाएको कपडा फेर्न पाउनु भा'छैन् ।
सञ्चारमाध्यमले फोटोसहित विहेको समाचार देखाउँदैछन् नि ?
त्यस्तो भइसक्यो है । ए त्यो डेनमार्क हुँदाको फोटो फेसवुकबाट हाले होला । -बुढानिलकण्ठको पार्क भिलेज रिसोर्टमा कुराकानी गरिरहेका उनी लवीमा छिरे । फेसवुकको एकाउन्ट तत्काललाई डिएक्टीभ गरिदिए ) अब त फोटो नभेट्लान कि ।
प्रसंग बदलौं, कोइराला परिवारमा पहिले कस्लाई चिन्नुभयो ?
वीपी अनि गिरिजाप्रसाद । (यही प्रसंगमा) अस्ति गिरिजावावुको निधनमा म कोइराला परिवारसंगै थिएँ ।
अमेरिका छाडेर नेपाल किन आउनुभएको ?
मलाई स्वदेशको औधी माया लाग्छ । यो देशमा रोजगारी र विकासमा योगदान गर्न चाहान्छु । फोहोर, गोबर, झारपात आदीबाट बिजुली, ताप र बाफ निकाल्ने विधी जानेको छु । केही महिनामैं एउटा गाउँ (नाम नखुलाऊ) बाट म त्यो काम थाल्दैछु । सरकारको साथ पाए, नेपालमा खेर गएको फोहोर र झारपातबाटै देश झलमल्ल पार्न सकिन्छ भन्ने देखाइदिनेछु ।
फोहोर व्यवस्थापनमा हालेको टेन्डर के भयो नि ?
फिनल्याण्डको प्रतिष्ठित संस्था इकोफिनसँग मिलेर काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थिए । तर, त्यहाँबाट मेरो संस्था छनौटमा परेन । केही व्यापारीहरुको लालसामा अल्झिएका सचिव र कर्मचारीले म जस्ता युवाको अवधारणा बुझेनन् । तर निराश भएको छैन् । काठमाण्डुमा काम गर्न नपाएपनि अरु शहरी क्षेत्रमा चाडै काम थाल्दैछु ।
« Reply #67 on: April 08, 2010, 10:58:54 PM »
Manisha Koirala to marry Samrat Dahal,aNepali businessman
Posted on April 6th, 2010 xnepali
Manisha Koirala,a40-year-old Bollywood super-star has finally decided to get married. Last month she told that she is planning to marryaNepali and stay in Nepal. The lucky Nepali, Samrat Dahal, has recently returned from US after completing his study in alternative energy.
Samrat is son of Surendra Dahal, the owner of Leather Wings,ashoes company. Samrat is currently working in Nepal Credit and Commerce (NCC) Bank, Kathmandu.
According to The Himalayan Times, the marriage decision was made on Monday, April 5. According to the traditional ceremony, Swyambar will be done on Ashad3(June 17, 2010), Mehandi on Ashad 4, and marriage will be done on Ashad5(June 19 , 2010) (Nagariknews published the date as Ashad 19 i.e. July 3). The official announcement is yet to be made, hence there are conflicting dates in different news.
« Reply #68 on: April 10, 2010, 01:01:39 PM »
हाम्रो बिहे मागी बिबाह होइन : मनिषा कोइराला
शनिवार, 10 अप्रेल 2010 09:29 नागरिक
काठमाडौं, चैत २८ (नागरिक)- बलिउड हिरोइन मनिषा कोइरालाले आफ्नो बिहे मागी बिबाह नभएको बताएकी छिन्। असार ५ गते बिहे गर्ने तयारीमा जुटेकी मनिषाको उद्यमी पुत्र तथा ब्यांकर साम्राट दाहालासँग लगनगाँठो बाँधिन लागेको हो। 'हो म बिहे गर्दैछु तर यो कुनै मागी बिबाह होइन,' इन्डो एसियन न्युज सर्भिससँग कुरा गर्दै मनिषाले भनेकी छिन्,'हामी दुबैको परिबारबीच सम्वन्ध भने पहिलेदेखिकै हो।'
उनी बिहेको लागि काठमाडौं आउँदैछिन्। पारिवारिक सम्वन्ध भएकाले साम्राटसँग घुलमिलको वातावरण बनेको भने उनले स्विकारेकी छिन्। 'साम्राटले मसँग बिहेको प्रस्ताव राख्यो, मैले स्विकारे,' मनिषाले भनेकी छिन्, 'तर, मेरै अनुपस्थितिमा मिडियाले मेरो बिहेको स्थान र मिति समेत तोकेछन्।'
नेपाली फिल्म फेरि भेटौला पछि सुभाष घईको सौदागरबाट बलिउड छिरेकी मनिषाको १९९१ को त्यो फिल्म नै ब्लकवास्टर भएको थियो। अहिले भारतकै मलायलम सिनेमाको अभिनय गरिरहेकी मनिषा केही समय भने काठमाडौंमै बस्नेछिन्। 'एउटा कुरा भने फेरिने निश्चत छ,' मनिषाले भनिन्, 'मुम्बई मेरो पहिलो घर हुने गर्थ्यो अब पहिलो घर काठमाडौं हुनेछ।' उनले साम्राटले बैकल्पिक उर्जा लगायतका व्यवसायिक क्षेत्रमा हात हालेकाले काठमाडौं‌मै केही समय बस्ने बताइन्। उनले आफू 'मुम्बई गर्ल' भने रहीरहने दावी गरिन्।
बिहे गर्ने भएपछि मनिषाको पेरिसको 'स्वप्न घर' नि? 'मैले स्वप्न घरलाई छाडेकी छैन। अहिले त्यो योजना केही समयका लागि थाँतिमात्र राखेको हो,' उनले भनिन्। मनिषाको जोडीले पेरिसमा हनिमुन मनाउने छ। उनले बिहेको हल्लासँगै साम्राटले फेसबुकबाट आफूलाई टाढा राखेको समेत बताइन्। 'उसले फेसबुकबाट तस्बिर हटाएको छ। हाम्रो बिहेपछि उसालाई पब्लक फिगर हुँदाको चासोमाथि बानी पर्न थाल्नेछ,' उनले भनिन्।
« Reply #69 on: April 30, 2010, 11:44:41 PM »
haina hou, jaha ni Manisha ko matra pic 6, tyo hamro hunewala uncle ko pic kahi 6ena ta hou............